ဟန်ဂေရီ, ဘူဒါပက်မှနေ့ခရီးစဉ် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ဘူဒါပက်, လမ်းပြ
မြို့တော်များသည်ခရီးသွား for ည့်သည်များအတွက်အမြဲတမ်းသံလိုက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်တိုင်းပြည်အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါကအနည်းငယ်ဝေး။ ဝေးကွာသွားခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ငါကအဆိုပြုထားသည် ဘူဒါပတ်စ်ထက် ဟန်ဂေရီ၏မြို့တော်။
တံခါးပေါက်သည်သံသယဖြင့်မြို့တော်ဖြစ်မည်မှာသေချာသည် ဘူဒါပက်မှတစ်ရက်ခရီးစဉ် သင်သည်ဤလှပသောတိုင်းပြည်ကိုပိုမိုသိကျွမ်းလာလိမ့်မည်။ ငါနှင့်အတူလိုက်ပါမလား
ဟန်ဂေရီ ဥရောပ၏ဗဟို၌တည်၏ ယူကရိန်း၊ စလိုဗက်ကီးယား၊ ရိုမေးနီးယား၊ ခရိုအေးရှား၊ ဆားဘီးယား၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်အခြားနိုင်ငံများစွာမှလာနိုင်သည်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်လေယာဉ်ဖြင့် Budapest တွင်ဆင်းနိုင်သည်။
မြို့တော်သည်တိုင်းပြည်၏ဘဏ္centerာရေးဗဟိုဖြစ်သည် ရှေးဟောင်းဒူညောင်းဒေသတစ်ခုလုံးသည်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သည် အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများ, ဘုရားကျောင်းဟောင်း, တရားဇရပ်, အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်နှင့်စိတ်ကူးအပူရေချိုးနှင့်အတူ။ သင်လေယာဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိလျှင် Ferenc Linszt အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ကြိုဆိုပါ၏ စင်တာမှ ၁၆ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိပြီးဘတ်စ်ကား၊ တက္ကစီသို့မဟုတ်ရထားဖြင့်သွားနိုင်သည်။ ရထားဖြင့် Terminal 16 မှ ၂၅ မိနစ်ခန့်ကြာပါသည်။
Budapest မှာဘာတွေမြင်ရလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသင်စီစဉ်ထားရမယ် ဘူဒါပက်မှဘယ်နေ့သွားရမလဲ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသော်လည်း၊
Szentendre ၎င်းသည်အနီးအနားရှိလူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် မြို့တော်မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ ၂၀ အကွာတွင်ရှိသည် နှင့်မိနစ် 40 ခန့်ရထားဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားစီး။ သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်မသက်သာသောမြစ်ကိုဆင်း။ သွားနိုင်သည်၊ သို့သော် ပို၍ လှသည်မှာသေချာသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရာသီဥတုကောင်းမွန်သောနေ့တစ်နေ့တွင်သွားလျှင်၎င်း၏တစ်ခုထဲ၌လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စားခြင်းနှင့်သောက်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည် ဤမျှလောက်များစွာသောစားသောက်ဆိုင်နှင့်အစားအစာဆိုင်ခန်း သို့မဟုတ်ဟနျဂရေီအမှတ်တရပစ္စည်းများဝယ်ယူ။ ဒါဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့ဖြစ်တယ် cobbled လမ်းများ, ၁၈ ရာစုအလယ်ပိုင်းမှ Blagovescenska ဘုရားကျောင်းကဲ့သို့သစ်ပင်များနှင့်အဆောက်အ ဦး ဟောင်းများ။
ကောင်းစွာအနားယူပါ ဒူညောင်း၏ဘဏ်များပေါ်မှာ ဒါကြောင့်ကမ်းခြေမှာအချိန်ဖြုန်းခြင်းသည်လည်းအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ pedestrianized Dumtsa Jeno တလျှောက်လမ်းလျှောက်ပါ သို့မဟုတ်၎င်း၏ပြတိုက်များ, ဗဟိုပလာဇာသို့မဟုတ် Postásပန်းခြံ နှင့်ကမ်းခြေပေါ်မှာအနားယူသည်ကြီးလှ၏။ နှုတ်ဆက်ရန်, သင်တက်နိုင်ပါတယ် Angryal Lookout။ သင်၏အကြံအစည်သည်တစ်နေကုန်နေရန်အတွက်သင်စက်ဘီးတစ်စီးငှားနိုင်သည်။
Visegrád Budapest နားကမြို့လည်းအရမ်းလှတယ်။ ၎င်းတွင်ဘဏ္aာ၊ ရဲတိုက်နှင့်၎င်း၏နံရံများမှဒူညုကျွန်းကိုဖြတ်ကျော်သောရှုခင်း၏မြင်ကွင်းသည်အလွန်ကြီးသည်။ ခရီးစဉ်၏အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းမှာလည်ပတ်ခြင်းဖြစ်သည် ၁၃ ရာစုရဲတိုက် သောတောင်ကုန်းထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေဒီကနေ အမြင်ကျယ်သငျသညျနှစ်နာရီမှသုံးနာရီအကြားတက်ဖို့ရှိသည်ပေမယ့်။ တန်သည်!
မင်းဒီလောက်လမ်းလျှောက်ချင်တာလား အင်းဒီတော့ကူးတို့ဘူတာမှာသင်ဖမ်းနိုင်တဲ့ဘတ်စ်ကားတစ်စီးရှိတယ်။ အပြင်ရဲတိုက်ကနေ အချို့သောကဖေးများ၊ ခေတ်ဆန်းနန်းတော်အပျက်အယွင်းများနှင့်ပြတိုက်တစ်ခုရှိသည်. Visegrádကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ El ဘူဒါပက်မှရထား ဒါဟာတစ်နာရီကြာ, ပြီးတော့သင်ကမြစ်ကိုဖြတ်ပြီး Castle Hill မှကူးတစ်ခုရှိသည်။ ဒါ့အပြင် ဘတ်စ်ကားရှိတယ် တစ်နာရီခွဲကြာသောÚjpest-Városkapuမှ။ မြင့်မားသောရာသီ၌ သင်သည်ဒိုင်ညူမြစ်ကိုရေစီးဖြင့်သွားနိုင်သည်, တစ်နာရီအတွင်း။
ဟန်ဂေရီတွင်ရှေးအကျဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည် ဘူဒါပက်စ်နှင့်ကီလိုမီတာ ၆၀ အကွာရှိအက်ဇတာဂမ်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းနှင့်ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများကိုနှစ်သက်သူများအတွက်၎င်းသည်လူသိများရမည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? တိုင်များနှင့်ခမ်းနားထည်ဝါသောဝင်ပေါက်များပါသောလှပသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးရှိသည် XNUMX ရာစု၏တော်ဝင်နန်းတော် နှင့်များစွာသောပြတိုက်။ ဤတွင်တစ်ကြိမ်တည်းနှင့်aroundရိယာပတ် ၀ န်းကျင်သို့လည်ပတ်ရန်အတွက်သင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကားသွားရန်ကားငှားနိုင်သည် Pilis တောင်တန်းများသို့လှည့်လည်ကြည့်ရှုပါ။
သင်ဒီမှာ Nyugati ဘူတာကနေတစ်နာရီခွဲလောက်ရထားနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ မြို့တော်ရှိဗဟိုဘတ်စ်ကားဂိတ်မှလည်းသင်ဘတ်စ်ကားစီး။ တစ်နာရီကြာနိုင်သည်။ ပြီးတော့ hydrofoil ဖြင့် Vigadoter ဆီကယူပြီးတစ်နာရီခွဲကြာပါတယ်။
အကယ်၍ ဤမြို့သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်မြို့ပုံစံဖြစ်သည်ဆိုပါကအခြားဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုလည်းရှိသည် EgerBukkk တောင်တန်း၏တောင်စောင်းတွင်၊ ဘူဒါပက်၏အရှေ့ဘက်ကီလိုမီတာ ၁၄၀။ မင်းမြင်လိမ့်မယ် Baroque အသင်းတော်များ, အပူရေချိုး, စျေးကွက်နှင့်ရှုခင်းများ လှသောအဆင်း။ Eger Basilica သည် ၁၉ ရာစု၏ပထမတစ်ဝက်မှဆင်းသက်လာပြီးလှပသောရှုခင်းများကိုပေးသည်။ ချာ့ချ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး Baroque ဘုရားကျောင်း 17 ခုရှိပါတယ် သိရန်, အပြင်၌ ဒိုဘိုရဲတိုက် သို့မဟုတ်၎င်း၏ 53 မီတာအမြင့်မျှော်စင်နှင့်အတူ Baroque Lyceum ။
သမိုင်းဝင် Eger မြို့ဟောင်းသည်လမ်းလျှောက်နေသောဘဏ္treာဖြစ်သည် နှင့်သူ၏ပုလဲ, တစ်သံသယမရှိဘဲဖြစ်ပါတယ် Eger ရဲတိုက် XNUMX ရာစုကနေချိန်းတွေ့ နှင့်အဆုံးမဲ့ပုံပြင်များရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာမင်းမှာအချိန်များများစားစားရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ဝိုင်ကိုကြိုက်ရင်မင်းလုပ်နိုင်တယ် မြို့ပြင်မှာရှိသောစပျစ်ဥယျာဉ်များကိုကြည့်ရှုလျှင်၊ မြို့မှ, လှပသောအမျိုးသမီးများ၏ချိုင့်၌။ Eger ကိုဘတ်စ်ကားဖြင့်နှစ်နာရီခန့်သို့မဟုတ် Keleti ဘူတာမှတစ်နာရီရထားသို့ရောက်နိုင်သည်။
နောက်ထပ်အကြံပြုလိုသည်မှာ Aggtelek အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် Baradla ဂူ။ နှစ် ဦး စလုံးနေရာများခမ်းနားဖြစ်ကြပြီးအချည်းနှီးမရှိကြပေ ပန်းခြံသည်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သည်။ ဆလိုဗက်ကီးယားနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတယ်၊ Budapest ကနေနှစ်နာရီခွဲမောင်းရတယ်နှင့်ဒေသခံသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်သတ္တဝါများကိုလေးစားရန်လမ်းကြောင်းကွန်ယက်တစ်ခုရှိသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့အကောင်းဆုံးကတော့ Baradla ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖြစ်ပြီး ၇ ကီလိုမီတာရှိတဲ့အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်ကိုသွားတယ်။ ဂူသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းသည် မဖြစ်မနေ။
Este ဒီဟာဝေးလံခေါင်သီတဲ့နေ့ခရီးတွေထဲကတစ်ခုပါ၊ ဒါကြောင့်ဟန်ဂေရီမြို့တော်ကိုစောစောထားခဲ့ပါ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ငှားရမ်းထားသောကားဖြင့်သွားပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းကလည်းလှတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းလမ်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရှိတယ်။ ရထားနဲ့ဘတ်စ်ကားရောက်လာတယ် ဒါပေမယ့်သိသာတယ်သူတို့နှစ် ဦး စလုံးထက်ပိုလေးနာရီယူပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်နောက်ဆုံးအကြံပြုလိုသောနေရာမှာဖြစ်သည် Hollóko။ ဘူဒါပတ်စ်မှဘတ်စ်ကားဖြင့်နှစ်နာရီကြာပြီးPuskás Ferenc ဘူတာမှနေ့စဉ်ထွက်ခွာသည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင်တစ် ဦး ဘတ်စ်ကားရှိပါသည်။ ရထားနဲ့သွားလို့ရပေမယ့်သိပ်ပြီးမလွယ်ပါဘူး
ဟော်လကာ ၎င်းသည်ဟန်ဂေရီယန်ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်သော World Heritage ဖြစ်သည်လှပသောအပျက်အယွင်းများနှင့်အတူ ရဲတိုက် တောင်ပေါ်မှာ XNUMX ရာစု ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်များ နှင့်လမ်းများစုံတွဲတစ်တွဲပါဝင်သည် ကျောက်နှင့်သစ်သားဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသောပုံမှန်အိမ် ၆၇ လုံး စူးစမ်းများအတွက်စံပြ။
အများအပြားပြတိုက်ရှိပါတယ် အရုပ်ပြတိုက်သို့မဟုတ်ရက်ကန်းပြတိုက်ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်အီစတာပွဲကိုသွားရင်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ကြပြီးအရာအားလုံးကအရမ်းအရောင်တောက်တယ်။ ရာသီဥတုကောင်းသည်လည်းလာရောက်လည်ပတ်သင့်သည် Skansen Open Air ပြတိုက်, ဟနျဂရေီအစဉ်အလာအချို့ကိုသိရန်။
ယခုအချိန်အထိအချို့ ဘူဒါပက်စ်မှလုပ်ဖို့အကြံပြုထားတဲ့ဆုံးရက်တွေ။ သူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုသင်နောင်တမရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ဘူဒါပက် » ဟန်ဂေရီ, ဘူဒါပက်မှနေ့ခရီးစဉ်